Kulamule imeya yaseNkandla 'kubangwa ukungena esiteji' - Ilanga News
Home Izindaba Kulamule imeya yaseNkandla ‘kubangwa ukungena esiteji’
Kulamule imeya yaseNkandla ‘kubangwa ukungena esiteji’
Kulamule imeya izinsizwa zasenkandla zijamelene, kubangwa uhlelo
UMCULI kaMaskandi, uKhuzani Mpungose (okwesobunxele) ocishe wabambana ngezihluthu noNgizwe Mchunu obephethe uhlelo emcimbini
weMayoral Cup eNkandla ngempelasonto.
KULAMULE iMeya yaseNkandla, uMnu Thami Ntuli, engusihlalo we-IFP KwaZulu-Natal – isijamelene phakathi kwezinsizwa zaseNkandla, uKhuzani “iNdlamlenze” Mpungose noNgizwe Mchunu kubangwa uhlelo lokungena kwamaciko esiteji emcimbini weMayoral Cup yase-Nkandla ngoMgqibelo.
Kuthiwa uNgizwe obengumphathi wohlelo, bekumele afake uKhuzani esiteji kodwa yena wamemezela ukuthi kuzongena imbangi yalo mculi, uMthandeni “iGcokama Elisha” Manqele.
Kubikwa ukuthi ukube uMnu Ntuli ubengekho, bekuzochitheka izishebo uKhuzani efuna ukungena, uNgizwe ethi ngeke kwenzeke lokho, kungena iGcokama Elisha.
Kuthiwa uKhuzani uthukuthele waze wathuka uNgizwe ngenhla-mba phambi kwabantu, ethi usekhathele nguyena, kanti abanye bathi uKhuzani ubonakale esecela ukunikezwa isikhwili, wasiyeka ngoba esebona imeya eduze kwakhe.
Kubikwa ukuthi amagidangoma alaba baculi abesemi wonke eduze kwesiteji, egqokile, elindele uku-ngena anandise.
Umthombo weLANGA uthi kuthe uma kusuka izidubedube, uNgizwe wamemeza ngombhobho, wathi ucela kusondele imeya.
“Uthe ‘wemeya, sondela ngapha nangu lo mfana (uKhuzani) efuna ukumosha umcimbi wakho, nje-ngamanje kumele kungene iGcokama uthi kungena yena ngenkani lana’,” kusho umthombo.
UKhuzani umemezele ukuthi akasazimisele ngokuqashwa emicimbini yaseNkandla uma kuqashwe uNgizwe njengomphathi wohlelo. Utshele ILANGA ukuthi usexhaphazeke kakhulu ngenxa kaNgizwe.
“Kasiqali ukuqashwa eNkandla nalo mculi (iGcokama Elisha), akubi nenkinga, kodwa ngaso sonke isikhathi uma kukhona uNgizwe, kusuka umsindo lapho esihlanganiswa khona.
KwiMpucuzeko wayenza le nto uNgizwe, wafaka uMthandeni esikhaleni sami ngo-12 ebusuku.
NakwiGcwalisa iMabhida wampintshisa, wamfaka ngaphakathi, wazama ukumfaka esiteji ngaphandle kwemvume,” kusho uKhuzani.
Uveze ukuthi ngokohlelo lokunandisa athunyelelwe lona eNkandla, igama lakhe belingaphezulu kweleGcokama Elisha, kodwa uNgizwe wazama ukukuguqula konke lokho.
“Kuthe uma ebona ngifika emcimbini ngipaka imoto ngemuva kwesiteji, wagijima waya emo-tweni yeGcokama eyohleba nalo, wabuya wamemezela ukuthi kuzongena lona ngoba ubefuna ukwenza lobu buqili babo. Sekwanele manje,” kusho uKhuzani.
Kuthiwa uNgizwe umemezele ukuthi uKhuzani makahlele umcimbi wakhe uma efuna ukwenza ubunsizwa, abenze kuwona.
ebuzwa ngalokhu uNgizwe, akathandanga ukuphawula ngalolu daba. UNkz Ndalo Sithole obelawula uhlelo lokungena kwamaciko esiteji, uthe umuntu omoshe umcimbi uNgizwe.
“UKhuzani uthe ucela ukufonelwa uma sekuzongena yena ngoba ufuna ukufika asebenze, ahambe, hhayi ukulinda. Ngimfonelile ngamtshela ukuthi sekunandisa uDSD, kuzothi emuva kwakhe bese kungena yena.
“Ngiyile kuNgizwe ngamtshela ukuthi kungena uKhuzani, bese behlukaniswa ngumculi oyedwa neGcokama.
“UNgizwe walile, wathi ngeke kwenzeke lokho, kuzongena iGcokama, wamemezela lona,” kusho uNkz Sithole.
UMnu Ntuli utshele leli phephandaba ukuthi lolu daba luxazululekile ngokukhuluma nabathintekayo.
“Ngikhulume noKhuzani, uNgizwe neGcokama bangihlonipha. Ngithole nokuthi uhlelo beluthi uKhuzani nguyena ophambili, ngase ngicela ukuba kuqhutshekwe njengoba bekuhleliwe,” kusho uMnu Ntuli.
Previous articleI-NFP isongele iMeya yaKwaNongoma ‘ngentelezi’
Next articleGRADE 9 Learners Competition – Term 2